Lalatiana Rakotondrazafy : Tsy manana etika sy deontôlôjia -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana Rakotondrazafy : Tsy manana etika sy deontôlôjia
Lalatiana Rakotondrazafy : Tsy manana etika sy deontôlôjia
13/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Natakalon’i Lalatiana Rakotondrazafy ny tombontsoany manokana ilay « etika sy deontôlôjia » noventiventesiny fa tandrovany fatratra, isaka izay miresaka tao amin’ny onjam-peo izy. Amin’izao fotoana izao dia tsy manana izany « etika sy deontolojia » izany intsony izy, raha ny fanaovan-gazety sy ny fanaovana politika no asian-teny. Efa ny baikon’i Mamy Ravatomanga, nanavotra azy tamin’ny fahazoany an’io onjam-peo Free Fm amin’izao io, no arahiny. Rehefa mibaiko io miliardera io, dia arahiny tsy misy fepetra. Rehefa miteny io tanora mpandraharaha io hoe ireto indray ny mpandraharaha haratsiana ao anaty Onjam-peo sy/na Gazety, dia iny tokoa fa tanteraka izany.
Ka moa va tsy toa ireny “saribakoly” ireny sisa Lalatiana Rakotondrazafy, eo am-panatanterahana ny asany. Tsy misy an’izany “etika” sy “deontolojika” izany fa izay tian’ilay “patron” be ( Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina) no tanterahina. Na ho asainy manitsa-t….aza, dia mety hanao koa.
Mazava ny tantara. Niara-niasa akaiky tamin-dRajoelina Andry i Lalatiana Rakotondrazafy tamin’ny fotoanan’ny Tetezamita. Tao amin’ny “Cabinet” nisy ny fikambanana Fitia tarihin’i Mialy Rajoelina no toerana nahitana azy foana. Tetsy ankilan’izany dia mbola mpiasa tao amin’ny radion’i Andry Rajoelina koa izy ( Viva). Nisy anefa ny tsy fifankahazoana, satria nanohana ny fahavalon-dRajoelina i Lalatiana Rakotondrazafy.
Rehefa nanokatra ny onjam-peony izy taorian’izay dia nanenjika mafy an-dRavatomanga Mamy. Noampangainy tsy ankijanona tao anaty onjam-peony tao io rangahy mpandraharaha io fa mpanondrana andramena. Nomeny anaram-bositra hoe “ramily” ( ramiliardera). Efa tonga hatreny amin’ny Fitsarana mihitsy aza io raharaha io. Vetivety anefa dia nijanona io tsikera an-dRavatomanga Mamy io. Nisy fifanarahana vita ara-taratasy mihitsy teo amin’ny roa tonta, ka nanao voady mihitsy Lalatiana Rakotondrazafy fa tsy hanenjika an’i Mamy Ravatomanga intsony. Nanaporofo izany ny fifindran’ny onjam-peo Free Fm ao amin’ny Villa Pradon Antanimena izay an-dRavatomanga Mamy ( teny Namontana ny Free Fm taloha). Mbola azo inoan-teny ihany ve Lalatiana Rakotondrazafy, izay tsy manana “etika” sy “deontolojia”, satria ny zavatra rehetra izay soratany sy teneniny ao anaty haino aman-jeriny dia vokatry ny toromarik’i Ravatomanga Mamy sy Andry Rajoelina avokoa ? Ny valiny : Tsia.
Nanaraka ny fepetra notakian’ny lalàna ny fitsarana an’i Lylyson, ilay senatera namoahan’ny fitsarana didy fampisamborana iny. Tsy marina mihitsy ny filazana fa fitsarana maka loko politika iny, hoy ny minisitry ny Fitsarana Charles Andriamiseza. ...Tohiny
Politikam-pirenena : Apetraka amin’ny toerana sahaza azy ny tanora
Hapetraka ny fotodrafitrasa avo lenta : Ho Madagasikara maoderina no tanjona
Fitifirana ny G2 Rado : TRANGA FAHEFATRA TANATIN’NY IRAY VOLANA!
Fetim-pirenena : Hampiantrano ny Podium etsy Mahamasina sy Antsonjombe